श्रावण २३, २०७७ मा प्रकाशित
१३०१८ पटक पढिएको
सिरहा । सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–१२ बेतौनाका उत्तिम लाल महतोको २२ वर्षीय छोरा अशोक महतोको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ । किडनीका बिरामी उनको बिहिबार राति धरानस्थित बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कणेलले जानकारी दिएका छन् । किनडीका बिरामी उनको नियमित डायलासिस प्रदेशिक अस्पताल जनकपुरमा हुँदै थियो । चार दिनअघि डायलासिसका लागि जनकपुर पुगेका उनको पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाब लिएर घर पठाएको थियो । घर फर्केपछि साउन २१ गत्ते दिउँसो उनको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । सोही दिन उनलाई प्रादेशिक कोभिड अस्पताल जनकपुर पठाइएको थियो ।
प्रदेशिक कोभिड अस्पालका संयोजक डा. जामुन प्रसाद सिंहका अनुसार किडनीको नियमित डायलासिस गराइउँदै आएका सात जना बिरामीमा कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएको छ । उनीहरु सबैलाई डायलासिस गराउन यहाँबाट बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्याउने र डायलासिस पछि एम्बुलेन्समा फेरी यहाँ ल्याउने गरिँदै आएको डा. सिंहले बताए । सोही क्रममा उनलाई बिहिबार बिहान एम्बुलेन्समा राखेर डायलासिसका लागि धरान पठाइएको थियो । डायलासिस भएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिदै गयो । आइसियुमा थप उपचार हुँदै गर्दा उनको मृत्यु भएको डा. सिंहले बताए । किडनीका बिरामीलाई कोरोना संक्रमण भयो भने उच्च जोखिम हुन्छ डा. सिंहले भने, ‘बांकी ६ जना कोरोना संक्रमित किडनीका बिरामीलाई पनि उच्च जोखिम छ । हामी नियमित धरान पुर्याउने ल्याउने गरिरहेका छौं ।’
कोरोना संक्रमित किडनीका बिरामीका लागि जनकपुरमा डायलासिसको सेवा उपलब्ध छैन । यो सेवा संचालनका लागि मेसिन खरिद गरिसकिएको छ डा. सिंहले भने ।,‘काम सुरु भैसकेको छ । दुई सातापछि यो सेवा प्रादेशिक कोभिड अस्पतालबाटै उपलब्ध हुन्छ ।’
बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट शव वाहन गाडीले गोलवजार स्थित गागन खोलासम्म ल्याइ उक्त शव वाहन गाडी फिर्ता भएको र शवलाई व्यवस्थापन गर्न शेरगण चोहर्वाबाट खटिएका सह सेनानी गोविन्द बहादुर गुरुङ्खबाट शव व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।